नियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? - Aajako Nepali Khabar
admin - December 29, 2020 December 29, 2020
महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै प’रिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सो’धकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार निय’मित स’हवास गर्ने महिलाको शारीरिक ब’नावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एकदिनमा नै पटक पटक सह’वास’मा लि’प्त बन्ने महिलाहरुको नि’तम्ब अर्थात हि’प फु’लेर ठूलो हुने गरेको पाइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हि’पको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ’न सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हि’प ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै स’मस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको। बिबिसी- सबैलाई थाहा छ, आमाको दूूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ। ६महिनासम्म स्तनपान गराउनु आवश्यक मानिन्छ। तर कति वर्षसम्म स्तनपान गराउने?यो पनि पढनुहोस्
बेलायतमा जबसम्म आमा र बच्चा चाहन्छन्, त्यति लासम्म स्तनपान गराउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ। स्तनपानबाट बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र उनीहरु बि’रामी पर्दैनन्। बेलायतका नेशनल हेल्थ सर्भिस(एनएचएस) ले पनि स्त’नपा’नका लागि कुनै समयसीमा तोकेको छैन। ६ महिनासम्म आमाको मात्र दूध खुवाउन सल्लाह दिइन्छ। त्यसपछि दूधका साथै अन्य खाद्यपदार्थ खुवाउन सकिन्छ।विशेषज्ञका अनुसार आमाको दूधले बच्चामा कुनै पनि सं’क्रमण हुन दिँदैंन। जबसम्म बच्चाले आमाको दूध खान्छन्, उनीहरुलाई मोटोपनाको समस्या
पनि हुँदैंन। स्त’नपान गराउन आमाका लागि पनि फा’इदाजनक हुन्छ। स्तन र अ’ण्डाशय क्यान्सरको ख’तरा हुँदैंन।एनएचएसले स्त’नपान गराउने कुनै सीमा नतोकेपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुुई वर्ष या सोभन्दा बढी समयसम्म स्तनपान गराउन सल्लाह दिएको छ। तर, रोयल कलेज अफ पेडियाट्रिक्स एण्ड चाइल्ड हेल्थसँग सम्बन्धित डा. म्याक्स डेभी भन्छन्, ‘दुूई वर्षपछि स्त’नपान गराउँदा
अतिरिक्त पोषण प्राप्त हुनेबारेमा एकदम कममात्र तथ्य प्राप्त भएको छ।’ अर्थात् २ वर्षपछि पनि स्त’नपान गराउँदा बच्चालाई खासै फाइदा नहुने बेलायती विशेषज्ञको मत छ। डा. डेभी भन्छन्, ‘स्तनपान गराउनु व्यक्तिगत विषय हो, यसले आमा र बच्चाको मायाप्रेमलाई मजबूत बनाउन मद्धत गर्छ, यसबाट कुनै नोक्सान हुँदैंन, त्यसैलेपरिवारलाई जे सही लाग्छ, त्यही गर्न सकिन्छ।’
एक आँकलनअनुसार बेलायतमा ८० प्रतिशत महिलाहरु स्त’नपान गराएको केही समयपछि नै छाड्छन्। ६ वर्षसम्म आमाको दूध पाउने बच्चाको संख्या एक तिहाई मात्र हुन्छ। सन् २०१६ मा प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय अ’नुसन्धानअनुुसार बेलायती महिलाहरु सबैभन्दा कम समयसम्म स्तनपान गराउनेमा पर्छन्। महिलाहरु सार्वजनिक स्थानमा स्त’नपान गराउन लाज मान्छन्, यसकारण पनि उनीहरु चाँडै नै स्त’नपान गराउन छाड्छन् ।